Dana White anoita hurukuro huru paRonda Rousey inogona kuitika yeUFC kudzoka - Wwe
Dana White anoita hurukuro huru paRonda Rousey inogona kuitika yeUFC kudzoka
Ronda Rousey's WWE hiatus yatopfuura kare kupfuura vanhu vazhinji vaitarisira. Zvinotaridza sekunge aimbove RAW Vakadzi Mhare haazodzokere kunhandare yewrestling chero nguva munguva pfupi, asi ko zvakadii nezve ingangove UFC kudzoka?
Dana White akapindura mubvunzo unodzokororwa nezve Ronda Rousey's MMA chinzvimbo panguva yemusangano wapfuura weUFC 260. Mukuru weUFC akacherekedza kuti anga ataura naRonda Rousey uye akajekesa kuti aimbove shasha yeUFC haana chishuwo chekukwikwidza mukati meOctagon zvakare.
'Ehe. Nezuro (Kutaura kune Rousey). Asi usatombo f ****** tanga neizvozvo, imi vakomana. Nezuro, nezve zvakawanda zvezvinhu zvakasiyana asi kwete izvi. Asi hongu, takataura nezuro. Chaizvoizvo, zvirokwazvo, kusazombodzoka. '
Chikamu chevakadzi cheUFC chaisazove zvazviri kana pasina zvipo zvaRonda Rousey. Rowdy akazove anokwezva zvakanyanya nekuda kwekumhanya kwake kukuru seUFC Women's Bantamweight Champion.
Kushaya simba kwaRonda Rousey muDhipatimendi rinorova kwakazomubata, uye akarasikirwa nehondo dzake mbiri dzekupedzisira asati atarisa kutambi yehunyanzvi.
Ronda Rousey achadzoka rini kuWWE?
Ronda Rousey pasina mubvunzo anga ari zaruriro munyika yewrestling. Rousey akasimuka kune chiitiko mune rake rookie gore muWWE, panguva iyo yaakaisa pamitambo yakawanda inonakidza. Rousey akakunda iyo RAW Women's Championship uye akabatsira mukusarudza kweWWE kuve neese-mukadzi mukadzi WrestleMania chiitiko chikuru.
Ronda Rousey akafamba achipinda muWrestleMania 35 seMhare yevakadzi yeRAW, uye akadonhedza zita kuna Becky Lynch pahusiku ihwohwo hwenhoroondo. Rousey kubva pazororo kubva mutsimba kutanga mhuri nemurume wake, Travis Browne.
Iko kutenda ndekwekuti Ronda achamuita kuti arwisane adzokere kana agadzirira, uye iyo WWE ichaita umugamuchirezve nemaoko maviri. Pakanga paine fungidziro pakutanga pamusoro pekuti angangobatanidzwa kuWrestleMania 37; zvisinei, WWE zviri pachena kuti haisi kuenda pasi nenzira iyoyo.
PWInsider anga ataura kumashure muna Gumiguru gore rapfuura kuti Ronda Rousey's WWE contract yaizopera kuWrestleMania 37. Vakuru veWWE vangangoda kukiya Rousey pasi kune chimwe chibvumirano, sezvo achine zvakawanda zvasara zvekupa kumberi kwekurwa.
Ronda Rousey zvakare ane rimwe bhizimusi risati rapera naBecky Lynch, uye kubhejera singles kukakavara pakati penyeredzi mbiri dzevakadzi kungave kwakanakira iyo WWE.
Iwe ungaverenga sei Ronda Rousey's WWE kudzoka? Ridza mhere muchikamu chemashoko pazasi.
zendaya naJacob elordi kutsvoda
nhetembo yekufa kwemudiwa
unoudza sei munhu wausingavade
zvinoratidza kuti haachandidi
murume wangu anoda mumwe mukadzi asi haasiye